Depression - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သဝန်တိုစိတ်ဆိုတာ မြင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကောင်လေး/ကောင်မလေး ပြေးမြင်လိုက်ပြီဆို စိတ်မကောင်းပါဘူး သဝန်မတိုရအောင် နေနေရတဲ့ ဘဝကို စာနာပါတယ် … ဟုတ်ပါတယ်…သဝန်တိုစိတ်ဆိုတာ လူတိုင်းဆီမှာ ရှိတတ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်ပါ…ထပ်ပြောရရင် ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဆီမှာ အများဆုံးရှိတတ်တဲ့ အရာတစ်ခု ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး….FA တွေကတော့ ကံကောင်းပါတယ် ..ဒီရောဂါ အဖြစ်နည်းပါတယ်…ဘာလို့လဲဆို သူတို့မှာ သဝန်တိုစရာလည်း မရှိလို့ပါ..
ဒီရောဂါကို ဆေးပညာအရ Pathological Jealousy လို့ ခေါ်လေ့ရှိသလို Morbid Jealousy/Delusional Jealousy လို့လည်း သိကြပါတယ်..1603 ခုနှစ်က ရှိတ်စပီးယားရဲ့ The Tragedy of othello,the Moor of Venice ဆိုတဲ့ ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ထဲမှာ မင်းသားက အရမ်းချောမောလှပတဲ့ ဇနီးသည်ကို ဖောက်ပြန်တယ်လို့ သံသယတွေ ဝင်လာပြီး သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီပြဇာတ်ထဲက ဇာတ်ဆောင်မင်းသားရဲ့ နာမည်ကို အစွဲပြုပြီး ဒီရောဂါကို Othello syndrome လို့လည်း ခေါ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်
ရောဂါနာမည်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပေမယ့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာကတော့ ရှင်းပါတယ်..ဝေဒနာခံစားရသူက အမျိုးသားဖြစ်တယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ရည်းစား/ဇနီးမယား/စေ့စပ်ထားတဲ့သူ အစရှိသူတွေအပေါ်မှာ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် မယုံသင်္ကာစိတ် သံသယစိတ် လွန်ကဲစွာ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတာပါ…ဝေဒနာရှင်က အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်း ထို့အတူပါပဲ..Silence အပါအဝင် Any relationship တိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
ဘယ်သူတွေမှာ အဖြစ်များလဲ?? ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာလဲ??အရက်ကို လွန်ကဲစွာ သောက်သုံးတတ်တဲ့ သူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်…ဒါပေမယ့် မသောက်တတ်တဲ့သူတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်ရယ်လို့ အတိအကျ ခိုင်ခိုင်မာမာ မပြောနိုင်ပေမယ့်…>>အရက်ကြောင့် ဦးနှောက်ကလပ်စည်းတွေ ပုံမှန်မဖြစ်တော့တဲ့ အခါမျိုးတွေ>>ဦးနှောက်ထိခိုက်ဖူးတဲ့ အခြားရောဂါရှိသူတွေ>>စိတ်ကျရောဂါသည်တွေ>>တစ်ချို့သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြသနာရှိသူတွေ>>လိင်စိတ်ဆိုင်ရာ ပြသနာရှိသူတွေ စသဖြင့် ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်…
သဝန်တိုစိတ်(သံသယစိတ်)ဘယ်လောက်အထိများမှ ရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်မလဲ??များသောအားဖြင့်ဒီစိတ်ကပြင်ပအကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်အပေါ် မူတည်လေ့မရှိဘူး…(ဆိုလိုချင်တာက ကိုယ်က ပိုင်ရှင်လည်းရှိတယ်..ထပ်လည်း ပွားသေးတယ်..အဲ့ဒါကို မိသွားပြီး နောက်မှ ပေါ်လာတဲ့ (များလာတဲ့) သံသယမျိုး ဖြစ်လေ့မရှိဘူး…)လူနာရဲ့ အတွင်းစိတ်ချည်း သက်သက်ကပဲ ပေါ်ထွက်လာတတ်တယ်..အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ သံသယက ပိုစွဲမြဲခိုင်မာလာတယ်…နောက်ဆုံးကျ လုံးဝကို ယုံကြည်လိုက်တယ်…
အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆို လူနာက>>သံသယစိတ်တွေ အတွေးတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေတတ်တယ်>>ဒီသံသယစိတ်တွေမဖြစ်အောင် သူကိုယ်တိုင်လည်း မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူး…(အတူတူဘယ်သွားသွား ဘာစားစား မပျော်ရတော့ဘူး )>>ကိုယ့် Partner ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကို ကန့်သတ်လာတယ်…>>တစ်ချိန်လုံးနီးပါး checking လုပ်နေတယ် (စကားအပြောအဆို အစအနကောက်တယ်၊ သူယုံကြည်သလို ကောက်ချက်ဆွဲတယ်၊မသင်္ကာဖွယ်သဲလွန်စတွေ ရှိမရှိ ရှာဖွေတယ်၊လိုက်ချောင်းတယ်၊လူလွှတ်စုံစမ်းတယ် )>>နှစ်ယောက်သား ဆက်ဆံရေးပျက်ယွင်းလာတယ်(လူနာကိုယ်တိုင်လည်း သံသယစိတ်နဲ့ အနေအစားပျက်လို့ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်လာသလို သူ့ partner ကို အတင်းအကြပ်ဝန်ခံခိုင်းတာ ၊ ရိုက်နှက်မေးမြန်းတာ၊ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေ လုပ်လာတတ်တယ်)
ကုသမှုက ဘယ်လိုလဲ???အချို့သော လူမှုရေးစံနှုန်းတွေ ၊ရိုးရာဓလေ့ အယူအဆတွေကြောင့် ရောဂါဖြစ်နေမှန်းတောင် မသိကြဘဲ Domestic violence အနေနဲ့ ရှိနေတတ်တယ်..ရောဂါရဲ့ သဘောသဘာဝအရ ကုသမှုခက်လေ့ရှိတယ်၊ကုသချိန် ကြာတတ်တယ်ဆိုပေမယ့်မကုသဘဲ ထားမယ်ဆိုရင် နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါ ပိုပြီးဆိုးဝါးတဲ့ စိတ်ရောဂါ အခြေအနေတွေအထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ် …ကိုယ့်ကိုယ် သေကြောင်းကြံတာ..တစ်ခြားသူတွေကို သတ်ပစ်တာ စသဖြင့် ဆိုးဝါးတဲ့အဆုံးသတ်တွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ၊ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်စေ ရောဂါဖြစ်တယ်လို့ သံသယရှိတယ်ဆိုရင် စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တစ်ဦးဦးနဲ့ အမြန်ဆုံးဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာဟာ အကောင်းဆုံးသော အဖြေတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ အကြံပေးရင်း ဒီ post လေးကို အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ် ..